NYI LYNN SECK 18+ DEN: July 2009
မြန်မာပြည်မှာ အချက်အလက် အတိအကျ ရဖို့ရာ တှောတှောခက်ပါတယ်။ အင်တာနက် အသုံးပြုသူနဲ့ ဘလော့တွေအကြောင်း ကျွန်တှောတို့ ဒီရပ်ဝန်းကလူတွေတောင် ခန့်မှန်းခြေနဲ့ပဲ ပြောနေရပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေ လုပ်နေရတော့ နိုင်ငံတကာက လေ့လာသူတွေ သိနိုင်ဖို့ အတိအကျရေးရာမှာ အခက်အခဲ တွေ့ကြရပါတယ်။ မြန်မာဘလော့ဂါ လောကကြီးဟာ ၂၀၀၇ နှစ်ဆန်းကစပြီး တရှိန်ထိုး တိုးတက်လာလိုက်တာ အခုဆို တှောတှောကို ကြီးထွားစည်ပင်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် မြန်မာဘလော့စစ်တမ်းလေး တစ်စောင်လောက် ကောက်ကြည့်ဖို့ ကျွန်တှော ဒါလေးကို လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတှောတှောများ ဒီလို စစ်တမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုရှိတဲ့အတွက် ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ အကဲဖြတ်လို့ ရတယ်။ ခန့်မှန်းလို့ရတယ်။ အနာဂတ်ကို မျှောကြည့်လို့ရတယ်။ ဒါလေးကို ကူညီဖြည့်စွက်ပေးကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တှောတို့ ဘလှောဂါတွေ ဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ ဘယ်လို အရာတွေကို ကျွန်တှောတို့ စိတ်ဝင်စားတယ်၊ ကျွန်တှောတိုပ ဘာတွေ လုပ်နေကြတယ် ဆိုတာတွေကို လေ့လာလို့ ရလာပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဘလော့ရေးတဲ့သူ မှန်သမျှ အောက်က စစ်တမ်းလေးမှာ ကူညီဖြည့်စွက်ပေးပါလို့ အလေးအနက် တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ အခြားသော ဘလော့ဂါများကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးပါလို့ အကူအညီတောင်းပါရစေ။
Click here to take Myanmar Blogger Survey 2009
1. ဒီစစ်တမ်း ကောက်ယူမှုဟာ တစ်လတိတိ ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဩဂုတ်လကုန်မှာ ဒီစစ်တမ်း ရလာဒ်ကို Analyze လုပ်ပြီး ပြန်လည် တင်ပြပေးသွားပါမယ်။ အားချင်း လုပ်ရတာမို့ ဖြေဆိုရာမှာ အခက်အခဲနဲ့ အဆင်မပြေတာအချို့ ရှိခဲ့ရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်။ အခမဲ့ဆိုပြီး သုံးလိုက်မိတဲ့ Application က အကန့်အသတ်နဲ့ ဖြစ်နေတာမို့ Upgrade လုပ်ပေးတဲ့ ကိုမင်းကျှောကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2. Data Duplication မဖြစ်အောင်က Blog Address ထည့်ပေးမှ ရမှာမို့လို့ အဲဒါလေးတော့ ထည့်ပေးကြပါလို့ အကူအညီ တောင်းလိုပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ ကွဲပြားမှုကို တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာ Tracking မှ မပါပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် အဲဒီမှာ အကောင့်ဖွင့်ပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
Posted by NLS at 7/30/2009 08:42:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/27/2009 07:08:00 PM0comments Links to this post
By Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan & Hinrich Schütze
Search Engine တွေ Information Retrieval တွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ဟောဒီစာအုပ်လေးဟာ အလွန်ပဲ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တှောလည်း မနေ့ကမှ NTU မှာ PhD Research လုပ်နေတဲ့ ကိုထွန်းသူရသက် ညွှန်ပြအကြံပေးလို့ သိခဲ့ရတာ။ နောင်တချိန် မြန်မာရှာဖွေရေးအင်ဂျင် လုပ်မယ့်သူများအတွက် လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ အောက်ပါ အခန်းကဏဿဍတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ ဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။
The term vocabulary and postings lists
Text classification and Naive Bayes
Vector space classification
Support vector machines and machine learning on documents
Download | Pdf | 5Mb
Posted by NLS at 7/27/2009 06:18:00 PM0comments Links to this post
Labels: Computer, Download, Ebooks
မနက်ဖြန် လက်ချာမှာပြောဖို့ အချက်အလက်တွေ ပြန်ရှာရင်း လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်က ရေးထားမိတာလေး ပြန်တွေ့တယ်။ ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့လည်း လတ်ဆတ်နေတုန်းပဲ။ လင်ယုတန်ကို သိခဲ့တာက ကိုငြိမ်းအေးအိမ်ရဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့ တိမ်ခိုးတွေ ကဗျာကြောင့် သိခဲ့တာ။ ဒါနဲ့ သဲကြီးမဲကြီး အင်တာနက်မှာ လင်ယုတန် အကြောင်းတွေ ရှာဖြစ်ခဲ့တယ်။
Remark: Repost October 09, 2005
Posted by NLS at 7/23/2009 06:52:00 PM0comments Links to this post
Unesco ရဲ့ 2009 World’s Languages in Danger Map ထွက်လာပါတယ်။ Ethnologue စာအုပ်အရဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ ဘာသာစကားပေါင်း ၁၁၃မျိုး ရှိပါတယ်။ ယူနက်စကိုရဲ့ အဆိုအရ အဲဒီဘာသာစကားတွေ ထဲက ၂ဂမျိုးဟာ ပျောက်ကွယ်မယ့် အနဿတရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ ဖွန်၊ မလင်း၊ ပျူ၊ တမန် ဘာသာစကား ၄မျိုးကတော့ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပါပြီတဲ့။ ဆြာယောတို့ရဲ့ ယောစကားလည်း Definitely endangered အဆင့်မှာ ရောက်နေပါပြီ။ ကျွန်တှောတို့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဘာသာစကားတွေ မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
List of Endangered languages in Myanmar:
4. Anung (Myanmar)
12. Laomian (Myanmar)
14. Mok (Myanmar, Thailand)
23. Sak (Myanmar)
Source: Unesco's World's Languages in Danger: Link
Ref: Ethnologue: Languages of Myanmar: Link
Posted by NLS at 7/22/2009 04:44:00 PM 1 comment Links to this post
Labels: Language, Map, Research, Resource
Tribes of Burma: Color Illustration
တွေ့ရခဲတဲ့ ပုံလေးတွေပါ။ South East Asia Digital Library မှာ Tribes of Burma ဆိုပြီး လှတပတ ပုံလေးတွေတွေ့လို့ ဝါသနာပါသူတွေအတွက် PDF လုပ်ပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁၉၀၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က လက်ရာလို့ ဆိုပါတယ်။ Northern Illinois University Libraries ရဲ့ Special Collections ပါတဲ့။ သူ့ဆိုဒ်က ပုံတွေက DJVU ဆိုတဲ့ ဖှောမတ်နဲ့ ပြပါတယ်။ အဲဒါကို ကြည့်ချင်ရင် ကိုယ့်စက်ထဲမှာ DJVU Plugin ကိုသွင်းရပါမယ်။ တစ်ပုံချင်း ဆို ကရိကထ များနေမှာစိုးလို့ ပေါင်းချုပ်ထားလိုက်တယ်။ အခြား မြန်မာ့ရှေးဟောင်း ပုံတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ Search နေရာမှာ Burma လို့ရိုက်ပြီး ရှာကြည့်လိုက်ပါ။
Download: Tribes of Burma | PDF | 4.9 Mb
Source: Southeast Asia Digital Library
Remark: Tribes တွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ၁၉၁၀ တုန်းက ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ C. C. LOWIS, I.C.S. ရဲ့ Tribes of Burma ဆိုတဲ့ စာအုပ်လည်း ဝီကီပှေါမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီးယားပှေါက ဟာကတော့ စကန်ဖတ်ထားတာ။ Wiki Source မှာတော့ Digitize လုပ်ပြီးသား စာသားအနေနဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။ [Ref] မြန်မာ့ဟှောတယ်နှင့် ခရီးသွားက တင်ထားတဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်မှာတော့ မြန်မာတိုင်းရင်းသား ၁၃၅မျိုး ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ [Ref]
Posted by NLS at 7/22/2009 04:16:00 PM0comments Links to this post
Labels: Download, Myanmar, Picture, Selection
အင်တာနက်ပှေါမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ အမေရိကန် သမဿမတ အိုဘားမားရဲ့ လျှပ်တပြက် ဓာတ်ပုံလေးပါ။ ဆာကိုဇီရဲ့ ခပ်ပြုံးပြုံး မျက်နှာကြီးကတော့ အဆစ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ အနှီကောင်မလေးရဲ့ နာမည်က Mayara Tavares ဖြစ်ပါသတဲ့။ အသက်က ၁၆နှစ် ဘရာဇီး ကျောင်းသူလေးပါတဲ့။ ဓာတ်ပုံလေးက အသက်ဝင်လွန်းလို့ အမှတ်တရအဖြစ် သိမ်းထားလိုက်ပါကြောင်း။ (နောက်ဆုံးရ သတင်းများအရ မစဿစတာအိုဘားမား ကြည့်နေတာ ကောင်မလေးခြေထောက်ဘေး ဓာတ်ပုံရဲ့ ဘယ်ဘက်အောက် အစွန်းမှာ ရှိနေတဲ့ အဖြူရောင် ဖိနပ်ကို ဖြစ်ပါတယ်တဲ့)
Posted by NLS at 7/21/2009 06:42:00 PM0comments Links to this post
မနေ့က ကျွန်တှော လောလောနဲ့ တင်လိုက်မိတဲ့ Population by State & Division and Sex မှာ အမှားအယွင်း နဲနဲ ပါသွားတဲ့အတွက် တောင်းပန်ချင်တယ်။ စာလေးနဲနဲ မှားရိုက်လိုက်မိတာက လူဦးရေ သိန်းဂဏန်းလောက် ပိုထွက်သွားတယ်။ မွန်ပြည်နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်က အချက်အလက်တချို့ မှားသွားပါတယ်။ (မိုးတွေ တအားရွာနေပေမယ့် ခုထိမီးမလာသေးလို့ LED ဖန်ချောင်းလေးနဲ့ မလင်းတလင်း ရိုက်ရတာကြောင့်လည်း ပါပါလိမ့်မယ်။ ဆင်ခြေ) နောက်ပိုင်း ဒေတာတွေမှာတော့ အမှားအယွင်းကင်းကင်း ဖြစ်နိုင်အောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ကွန်မန့်ထဲမှာ ကိုဝီရှီမီ ပြောထားတာတဲ့ အသက်အလိုက် လူဦးရေဇယားကို ပြန်စစ်ထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ အမှားမပါပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ အသက်ကြီးလာလေလေ လူဦးရေ နည်းသွားလေလေပါပဲ။ နောက်ထပ်လည်း သိပ်စိတ်ဝင်စရာကောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေကို တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။
Myanmar Statistical Year Book 2007 ထွက်လာတော့ ပြေးဝယ်လိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်အပြင် စီဒီဗားရှင်းလည်း ရှိတယ်။ ဘာယူယူ ၈၀၀၀ မို့လို့ စာအုပ်ပဲ ယူလာခဲ့တယ်။ ကျွန်တှော့အတွက်တော့ ဒီကိန်းဂဏန်းတွေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ အတိပါပဲ။ သခဿငျာကိုလည်း စိတ်မဝင်စား၊ စီးပွားရေးလည်း စိတ်မဝင်စားပေမယ့် ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကို ကြည့်ပြီး ဆက်စပ် စဉ်းစားကြည့် ရတာမျိုးကိုတော့ အထူးပဲ စိတ်ဝင်စားမိပြန်တယ်။ စာအုပ်ထဲက အချက်အလက်တချို့ကို ကူးယူပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ Analyze လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ အာရုံကျတာလေးတွေကို Chart လေးတွေ လုပ်ထားဖြစ်တာ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ လူဦးရေဟာ 56515000 ဖြစ်တာမို့ လူဦးရေ တိုးနှုန်း ၂.၀၅နဲ့ တွက်ကြည့်ရင် ၂၀၁ဝမှာ သန်းခြောက်ဆယ် ပြည့်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနဿတလေးက လူဦးရေ အများဆုံးနဲ့ ရတနာပုံFC လိုပဲ ဗိုလ်စွဲနေပါတယ် (ဆွေမျိုးပေါက်ဖှောတွေများ များနေသလားလို့)။ ကယားပြည်နယ်ကတော့ လူဦးရေ အနည်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အမျိုးသမီး အများဆုံးမှာလည်း မနဿတလေးက ဗိုလ်စွဲပါတယ်။ ကယား၊ မွန်၊ ပဲခူး၊ ရှမ်း၊ ဧရာဝတီဒေသတွေမှာ ယောက်ျားဦးရေဟာ မိန်းမဦးရေထက် များတာကို တွေ့ရတယ်။ ကျန်ဒေသတွေမှာတော့ မိန်းမက များပါတယ်။ ယောက်ျားမိန်းမ ဦးရေ ကွာခြားချက်မှာတော့ သိပ်ကွာခြားတာ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒါက ပြည်နယ်၊ တိုင်းအလိုက် လူဦးရေ ဇယားပါ။
နောက်တစ်ခုက အသက်အရွယ်အလိုက် လူဦးရေပါ။ မွေးစကလေး အများဆုံးဆိုတာ သိပ်မထူးဆန်းပေမယ့် အသက် ကြီးလာလေလေ လူဦးရေ နည်းလာလေလေ ဖြစ်နေတာက ထူးဆန်းတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ သူများနိုင်ငံတွေရော အဲလိုပဲလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကွန်တိုမြေပုံ သင်ရသလိုမျိုး ဘာတွေ့လို့ ဘာဖြစ်တယ် ဆိုတာမျိုး လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တွေ လိုအပ်သူများရှိရင် အလွယ်တကူ ကိုးကားနိုင်အောင်လို့ပါ။
Population of Myanmar by States & Divisions and Sex (2006 Oct 1)
Population of Myanmar by Age Group and Sex (2006 Oct 1)
Remark: Data extracted from Statistical Yearbook 2007 by Central Statistical Organization, Ministry of National Planning and Economic Development.
Posted by NLS at 7/19/2009 05:33:00 PM0comments Links to this post
Labels: Sharing, Statistic, Thought
SIL ကနေ ထုတ်တဲ့ Ethnologue: Languages of the world ဆိုတဲ့ စာအုပ် ဆယ့်ခြောက်ကြိမ်မြောက် ထွက်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီရဲ့ ဘာသာစကားမျိုးစုံကို စနစ်တကျ စုစည်းပေးထားတဲ့၊ နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်တွေ အားလုံး လက်ကိုင်ထားရတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားတွေ အကြောင်းကိုလည်း ခြေခြေမြစ်မြစ် သိရတာမို့ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်တယ်လို့ လက်တို့ချင်ပါတယ်။ (ကျွန်တှော့ဆီမှာတော့ 15th Version ပဲရှိတယ်။ ဒါတောင် စကဿငာပူက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကျေးဇူးကြောင့် ရထားတာမို့ သူ့ကိုလည်း အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်)
6,909 language descriptions organized by continent and country
41,186 primary names, alternate names, and dialect names
208 color maps showing location and distribution of languages
Unique three-letter identifier for each language from the International Standard ISO 639-3
Statistical summaries with numerical tabulations of living languages and number of speakers by continent, by language size, by language family, and by country
Quality 7"x10" hardbound single volume
Union of Myanmar, Pyeidaungzu Myanma Naingngandaw. Formerly Burma. 47,967,000. Tibeto-Burman speakers: 78% of the population, Daic languages 10%, Austro-Asiatic languages 7%, Hmong-Mien languages 6,000 (1991 J. Matisoff). National or official language: Burmese. Literacy rate: 66%–78%; 79% over 15 years old (1991). Immigrant languages: Bisu, Eastern Tamang, Iu Mien, Malay (21,000), Sylheti. Also includes Chinese (1,015,000), Malay (21,000), and languages of Bangladesh and India (500,000). Information mainly from R. Burling 2003; D. Bradley 1997; B. Comrie 1987; A. Hale 1982; R. Jones 1988; F. Lebar, G. Hickey, J. Musgrave 1964; J. Matisoff, S. Baron and J. Lowe 1996. Blind population: 214,440. Deaf population: 2,684,514. Deaf institutions: 2. The number of individual languages listed for Myanmar is 113. Of those, 111 are living languages and2have no known speakers.
Karen, Pwo Western
Naga, Long Phuri
စာအုပ်ကို မဝယ်သေးဘဲ မြည်းစမ်းကြည့်ဦးမယ် ဆိုရင်လည်း Online Version အနေနဲ့ ရှိပါတယ်။ [Link: ethnologue] စာအုပ်လို အလွယ်တကူ လှန်လှောလို့ မရတာကလွဲလို့ အပြည့်အစုံ နီးပါးပါပဲ။ စာအုပ်မှာပါတဲ့ မြေပုံတွေကိုတော့ ဝဘ်ပှေါမှာ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ ဘာသာစကား နာမည်တွေ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ တွေ့တော့မှ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ရှိပါလားဆိုတာ သိတော့တယ်။ တန်ဖိုး ဒှေါလာ ၁၀၀ ဆိုတာက အနည်းငယ် များတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ဘာသာစကားကို ဝါသနာပါတဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ နှမြောမယ် မထင်ပါဘူး။
Posted by NLS at 7/19/2009 04:59:00 PM0comments Links to this post
Labels: Book Review, Language
ခေတ်ဟောင်း သတင်းစာများက ပြောသော ၁၂လရာသီ အဖြစ်အပျက်များ
ခေတ်ဟောင်း သတင်းစာများကပြောသော ၁၂လရာသီ အဖြစ်အပျက်များ
နဝမအကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေး အခမ်းအနားသို့ နောက်ဆုံး ဘုရင်ခံဟောင်း တက်ရောက်
ရန်ကုန်နှင့် မနဿတလေး စကားပြောကြေးနန်းဖြင့် တစ်ပြိုင်နက် ဆက်သွယ်နိုင်ပြီ
ရွှေစက်တှောသွား မှောတှောကားလမ်းသစ် ဖောက်လုပ်နေပြီ
ရာဇဝင် ဇာတ်ကားများ၌ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု တိကျမှန်ကန်ရေး ကြိုးစားသင့်
မင်းကွန်း၌ လူအိုရုံ (ဘိုးဘွားရိပ်သာ)ကို စတင်ဆောက်လုပ်
တရုတ်-မြန်မာ လမ်းမကြီး စတင်ဖွင့်လှစ်
ယိုးဒယား ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကား မြန်မာနိုင်ငံ၌ လာရောက်ရိုက်ကူး
နိပေါဘုရင်၏ လက်ဆောင် ကြံ့မကလေး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးခေါင်းဆောင် ဝန်းသိုစှောဘွားကြီး ကွယ်လွန်ရှာပြီ
တောရိုင်းဆင်များအား မေ့ဆေးသေနတ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးနည်းသစ် စတင်ပြီ
သီပေါဘုရင်၏ သမက်က အဂဿငလိပ် ဘုရင်ခံကို စိန်ခှေါ
မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့် သဘေဿငာကုမဿပဏီ စတင်တည်ထောင်
ကမဿဘာတစ်ပတ် ခြေကျင်လှည့်လည်သူ ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အိနဿဒိယဘာသာဖြင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကား ရိုက်ကူးမည်
လပှေါမှ ယူဆောင်လာသော ကျောက်တုံး ရန်ကုန်မြို့၌ ပြသမည်
ရသေ့ကြီး ဦးခနဿတီ ပျံလွန်တှောမူပြီ
ကမဿဘာကျှော စာရေးဆရာကြီး ဆမားဆက်မောမ် ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိ
မဟာဗနဿဓုလ၏ တပ်သားဟောင်းကြီး ဆိုသူ ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိလာ
ကျေးရွာ ၁၀၀ စုပေါင်း ရှင်ပြုပွဲ ကျင်းပ
ရွှေတိဂုံစေတီတှောအတွင်း တံခါးဖွင့်လှစ် ရှင်းလင်း
ဖေပုရှိန် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိ
ဆဋဿဌသဂဿငါယနာတင်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် လိုဏ်ဂူတှော အဆောက်အအုံ အုတ်မြစ်ချ
ရာဇဓာတုကလျာ၏ ကျောက်ပျဉ်ကို တွေ့မြင်ရာမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထူးဆန်းစွာ ငိုကြွေး
ဂျပန်စစ်လျှောကြေးအဖြစ် မီးရထားတွဲ ၁၁၃တွဲ ပေးပို့
မြန်မာ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး ဆာဦးသွင် ကွယ်လွန်
စောင်းဆရာကြီး ဒေဝဣနဿဒာမောင်မောင်ကြီး ကွယ်လွန်
ခရမ်းရောင်လွင်ပြင် ဇာတ်ကားမှ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးက ပြည်သူ့ဂျာနယ်အား တရားစွဲဆို
ဝိတိုရိယဘုရင်မ ရုပ်တု သံလွင်မြစ် အတွင်းသို့ ပစ်ချမည်
ဂြိုဟ်ကြီးရှစ်လုံးပူးချိန် မြန်မာနိုင်ငံ မြို့ကြီးများ၌ ပရိတ်ရွတ်
ပြဒါးလင်းဂူ လေ့လာရေးအဖွဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တစ်ရပ် ကျင်းပ
ရက်သတဿတ (၁)ပတ်အတွင်း ယာဉ်တိုက်မှု (၁၉)မှု ဖြစ်ပွား
ပညာမင်းကြီးဦးကောင်း ကာလကတဿတားမြို့၌ ကွယ်လွန်
ဗီယက်နမ်သမဿမတကြီး ဟိုချီမင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ် ရောက်ရှိလာ
မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် တောင်တက်သမားများကို ဟိမဝနဿတာ တောင်တက်ကျောင်းသို့ ပို့မည်
မြန်မာနိုင်ငံမှ တီထွင်သော စက်ရုပ်အား ပြည်ထောင်စုပွဲတှော၌ ပြသထား
ပထမဆုံးအကြိမ် ယိုးဒယား-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး အပြေးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
အဖိုးတန် မြန်မာ့သစ်ခွပန်းများ နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ရောင်းချမည်
မနဿတလေးပြတိုက်မှ နန်းတွင်းပစဿစည်းအချို့ အခိုးခံရ
အင်းဝမြို့တှော နှစ်၆ဝဝပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပမည်
ကျောက်ရောဂါ လုံးဝ ကင်းရှင်းပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ
သဘေဿငာ နစ်မြုပ်မှုကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ လိမ်လည်သူအား ဖမ်းဆီးရမိ
ရွှေတိဂုံစေတီတှော အဂဿငါထောင့်သို့ ကျားတစ်ကောင် တက်ရောက်
ရုပ်ရှင်မင်းသား မြင့်စိုးနှင့် အခြားသုံးဦး မီးရထားပှေါ၌ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရာမှ ဒဏ်ရိုက်ခံရ
သံတွဲမြို့အနီး၌ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား
ပျူ ကခြေသည်ရုပ်များ ပြတိုက်အတွင်းမှ အခိုးခံရ
ဂျာမန်-မြန်မာ အဘိဓာန် ပြုစုရေး ကှောမတီ ဖွဲ့စည်း
ကင်းဝန်မင်းကြီးကောင်းမှု သာကဝန်ကျောင်းတှော ချိုးဖျက်ခံရ
မြန်မာပြည် စစ်မျက်နှာ တိုက်ပွဲများတွင် သံချပ်ကာကား စတင် အသုံးပြုပြီ
ကျပ်ပြားစနစ် လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်
လှေငယ်တစ်စင်းနှင့် ကမဿဘာလှည့်နေသူ မြိတ်မြို့သို့ ဝင်ရောက်လာ
ရန်ကုန်ရောက် ဗြိတိသျှရေငုပ်သဘေဿငာပှေါသို့ သတင်းစာဆရာများအား ဖိတ်ခှေါပြသ
ရန်ကုန်မြို့ပတ် မီးရထားလမ်း ဆက်မိတော့မည်
ကောင်းကင်မြေတိုင်းလုပ်ငန်း စတုရန်းမိုင် ရှစ်သောင်းကျှော ပြီးစီး
ဘုရင်ခံဟောင်း ဆာဂျေအေမောင်ကြီး ကွယ်လွန်
ကမဿဘာအေးကုန်းမြေအနီး၌ ငလျင်တိုင်းထွာစက်ကြီး ဆောက်လုပ် တပ်ဆင်မည်
စစ်တောင်း တံတားသစ်ကြီး ဖွင့်လှစ်ပြီ
ဖက်ဆစ်ဂျပန် တှောလှန်ရေးတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သူ စစ်သားတစ်ဦး တောင်တွင်းကြီး၌ လူဝင်စားဖြစ်လာ
ကမဿဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ သွားရောက်ပြသ
မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးပညာရှင်များ အစွမ်းကြောင့် ၁ဝနှစ်တိုင် စကားမပြောနိုင်သူ စကား ပြန်လည် ပြောဆိုနိုင်ပြီ
နိုင်ငံတှောအလံကို အလေးမပြုသူ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နှစ်ဦးအား အရေးယူမည်
ဒီဆူဇာကုမဿပဏီ နှစ်ဂဝပြည့် အခမ်းအနား၌ မြန်မာလူမျိုးတစ်ဦးထံ လုပ်ငန်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်
ဓနုဖြူမြို့၌ မဟာဗနဿဓုလကြေးရုပ် ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
အပိုလို၁၂ အာကာသယာဉ်မှူးများ ရန်ကုန်သို့ အလည်အပတ် ရောက်ရှိလာ
သီပေါမင်းလက်ထက် မြို့တှောဝန် ရွှေလံဗိုလ် ကွယ်လွန်
အိနဿဒိယ-မြန်မာ တယ်လီဖုန်းလိုင်း စတင် ဖွင့်လှစ်
အိနဿဒိယ-မြန်မာ ဖက်စပ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးနေပြီ
အာလိန်ငါးဆင့် ဘုံမြင့်စေတီ လေယာဉ်လမ်းကြောင်း မလွတ်၍ မီးနီ ပြထားပေးရန် ညွှန်ကြား
ပင်စင်ယူရမည့် အသက်ကို ၅၅နှစ်မှ ၆ဝနှစ်သို့ တိုးမြှင့်လိုက်ပြီ
သမဿမတဟိုတယ် စတင် ဖွင့်လှစ်ပြီ
နှင်းဆီကုန်း ဘိုးဘွားရိပ်သာ စတင် ထူထောင်
အထူးမင်းကြီး ဗိုလ်စိန်မှန် လေယာဉ်ထက်၌ ကျည်သင့် ကျဆုံး
အိနဿဒိယ အမျိုးသား စက်ဘီးပညာရှင် ရန်ကုန်မြို့သို့ လာရောက် အစွမ်းပြ
မြန်မာ့ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစက်ရုံမှ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီ
သီပေါမင်း၏ ဒုတိယသမီးတှော ကွယ်လွန်
သခဿငျာပါရမီရှင် အိနဿဒိယအမျိုးသမီး ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိ
နန်းမတှောမယ်နု၏ ချိတ်ထမီ တောင်တွင်းကြီးပြတိုက်သို့ လာရောက် လှူဒါန်း
ခနဿတီးခရိုင်အတွင်း ကျောက်စိမ်းတောင်ငယ် တစ်တောင် တွေ့ရှိ
နှစ်ကူးကာလ ဆုတောင်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ ဘာသာပေါင်းစုံမှ ပုဂဿဂိုလ်များ တက်ရောက်
အလောင်းမင်းတရားကြီး၏ ဗုဒဿဓရုပ်ပွားတှော ရန်ကုန်သို့ ပင့်ဆောင် ရောက်ရှိလာ
မြန်မာပန်းချီဆရာကြီးတစ်ဦး ဥရောပ နိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီး ထွက်ခွာ
ရွှေတိဂုံ စေတီတှော ရင်ပြင်ရှိ နောင်တှောကြီးစေတီ ထီးတှောသစ် တင်လှူမည်
အောင်ဆန်းအားကစားပြိုင်ကွင်းတွင် ခေတ်မီ မီးမောင်းကြီးများ တပ်မည်
သကြဿငန်ရေ ဖြုန်းတီးမှုကြောင့် ကုကဿကိုင်းရေလှောင်ကန် ရေနည်းပါး။
အစောဆုံး တွေ့ရှိရသည်ဟု ယူဆရသည့် ခါးပိုက်နှိုက် သတင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံး မီးရထားလမ်း စတင်ဖွင့်လှစ်
သီပေါမင်း၏ သားမက်ဖြစ်သူက ဘိုကပြား အမျိုးသမီးနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြား
မဟာမိတ်တပ်များ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိလာ
နိုင်ငံတှောလုပ်ကြံမှုကြီးကို ဦးစီးဦးဆောင် ပြုခဲ့သူ ဂဠုန်ဦးစောနှင့် အပေါင်းအပါတို့အား ကြိုးဒဏ်စီရင်
ရွှေတိဂုံစေတီတှောသမိုင်း စီနီမာစကုတ် ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးပြီ
မြန်မာသူနာပြု ဆရာမကြီး ဖလောရင့်နိုက်တင်ဂေးဆု ရရှိ
စာဆိုတှော ရှင်ဥတဿတမကျှော၏ အရိုးအိုးဂူကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီ
ရုပ်ရှင်မင်းသမီး မေရီမြင့် ကွယ်လွန်
တှောလှန်ရေးအစိုးရ ဗုဒဿဓသာသနာအဖွဲ့၏ ပထမဆုံး ပိဋကတ် မြန်မာပြန်စာမေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
စစ်တွေနှင့် ကျောက်ဖြူမြို့တို့၌ လေမုန်တိုင်း ပြင်းထန်စွာ တိုက်ခတ်
မိုင်တစ်ရာကျှော စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ
ကမဿဘာ့ကျန်းမာရေးဆု (ဆာဆာကာဝါဆု)ကို မြန်မာနိုင်ငံ အရာတှောမြို့နယ်က ရရှိ
ပဲခူးမြို့၌ မြေငလျင် ပြင်းထန်စွာလှုပ်၍ ရွှေမှောဓောစေတီ ပြိုကျပျက်စီး
ကမဿဘာကျှော မျက်မမြင် စာရေးဆရာမကြီး ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိ
ပထမဆုံးအကြိမ် လေထီးသင်တန်း ကျောင်းဆင်းပွဲ
အာရှအိုလံပစ် အားကစားပွဲတှော ကာလအတွင်း တိုကျို-မြန်မာ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ် စကားပြောနိုင်
ဆေးပညာ ဘွဲ့လွန်သင်တန်း ပြည်တွင်း၌ စတင်ဖွင့်လှစ်
စာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်ရွှေမျှား ကွယ်လွန်
စာရေးဆရာကြီး ဦးလတ် ကွယ်လွန်ပြီ
စာရေးဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တှောမှိုင်းက စတာလင်ဆုငွေ တစ်ဝက်ကျှောကို ပြန်လည်လှူဒါန်း
ရုရှား-မြန်မာ ဖက်စပ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သော မဟာဗနဿဓုလ အသံထွက်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးရန် ဆွေးနွေး
၁၉၅၉ မေလအတွင်း မှုခင်းများ လျော့ကျသွား
ပညာရေးတကဿကသိုလ်၌ ကိုယ်တိုင်ယူစားစနစ် စမ်းသပ်အောင်မြင်
ဆရာတှော ဦးဥတဿတမ၏ လက်ရေးစာမူနှင့် ဂုဏ်ပြုဆောင်းပါး ဓာတ်ပုံများ အမျိုးသား စာကြည့်တိုက်၌ ပြသမည်
ပျဉ်းမနား-တောင်တွင်းကြီး မီးရထားလမ်းသစ် စတင်ဖွင့်လှစ်
မနဿတလေးမြို့၌ နှစ်တစ်ရာပြည့်ပွဲတှော ကျင်းပပြုလုပ်
ကျိုကဿကစံစေတီတှော၌ ရောင်ခြည်တှောများ ကွန့်မြူးလျက်ရှိရာ မယုံကြည်သူများအား လက်တွေ့ တက်ရောက် စစ်ဆေးခွင့်ပြု
ခေတ်စမ်းစာရေးဆရာကြီး သိပဿပံမောင်ဝ ကွယ်လွန်
ပုပဿပါးနယ်တစ်ဝိုက်၌ သစ်ပင်များ ခုတ်လှဲခြင်း မပြုရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်
ဘုရားဖူး အထူးမီးရထားတွဲ ငှားရမ်းနိုင်ပြီ
မြန်မာပြည် မီးရထားရာဇဝင်၌ ပထမဆုံးသော ရထားဝင်ရိုးကျိုးမှု ဖြစ်ပွား
ပျူအကဿခရာစာတန်းပါ ဘုရားခုနစ်ဆူ တောင်တွင်းကြီးပြတိုက်သို့ လှူဒါန်း
ရွှေတလေးအမည်ခံ ကာတွန်းဦးဘကလေး ကွယ်လွန်
ပထမဆုံး အမျိုးသမီးတပ်ခွဲ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်
စလေဦးပုည၏ နှစ်တစ်ရာ့ငါးဆယ်ပြည့်မွေးနေ့ ကမဿဘာအရပ်ရပ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည်။
သီပေါမြို့အနီး၌ ဂှေါဒန်ကျောက်တန်းကြီး တွေ့ရှိ
အသံနှင့်လက် အာမခံ ထားရှိရန် ပန်းချီဆရာ၊ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးနှင့် အဆိုတှောများ ကမ်းလှမ်း
အဂဿငလန်နိုင်ငံမှ ဗုဒဿဓရုပ်ပွားတှောတစ်ဆူ ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိလာ
စစ်အတွင်းက ကျန်ရစ်သော ဂျပန်သုံးဦးအား ဆယ်နှစ်ကြာမှ ပြန်လည်တွေ့ရှိ
ပထမဆုံး ဆေးရောင်စုံ မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား စတင်ပြသ
မြင်းခြံမြို့၌ ကွမ်းယာဆိုင်များ ကွမ်းယာရောင်းခြင်း ခွင့်မပြု
အောင်တေဇသဘေဿငာကြီး မုန်တိုင်းမိ၍ နစ်မြုပ်သွား
နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ဗျိုင်းကြီး၊ ဗိုလ်ဗျိုင်းလေးတို့၏ အုတ်ဂူများ ဖယ်ရှားရန် စီစဉ်မှုကို ကန့်ကွက်
မြန်မာပြည် အမျိုးသား အပျှောတမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်း
အလိုအလျောက် မီးတောက်သည့် ကျောက်ခဲအား စမ်းသပ်ရန် ဓာတုဗေဒဌာနသို့ ပေးပို့
ရန်ကုန်တိုက်ခန်းများအပှေါ ရေမတက်မှုကို စစ်ဆေးရာမှ စစ်အတွင်းက ဗုံးကျ၍ ရေပိုက် ပေါက်နေသည်ကို တွေ့ရှိ
မင်းတုန်းမင်း၏ နောက်ဆုံးသားတှော ကွယ်လွန်
ရွှေတိဂုံစေတီ၌ ထီးတှောသစ် လှူမည်
ကမဿဘာပှေါတွင် ပထမဆုံးသော လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲမှု မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပွား
မြန်မာသတင်းစာပါ မင်းလက်ဝါး သတင်း
တစ်နာရီ ရေဂါလံတစ်ထောင်ကျှောထွက်သော အဝီစိတွင်း ရန်ကုန်ှု တူးဖှောအောင်မြင်
သီပေါမင်းနှင့် ကျောင်းနေဖက် ဆရာတှောကြီး အပါအဝင် သက်ကြီးရွယ်အိုများအား ပူဇှောကန်တော့
နှစ်၅ဝအတွင်း ရဲအုပ်သင်တန်းသို့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အမျိုးသမီးများ တက်ရောက်
ဖရင်းရှစ်(၇) အာကာသယာဉ် ရန်ကုန်မြို့၌ ပြသမည်
မနန်းစိုး၊ မနန်းစံ အမြွှာညီအစ်မအား ခွဲစိတ်ကုသ
အစိုးရဆေးရုံများ၌ အခမဲ့ဆေးကုသခွင့် ပြုပြီ
လေရူးသုန်သုန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနှင့် ပတ်သက်၍ မူပိုင်ခွင့်ကိစဿစ ဖြစ်ပွါး
လေယာဉ်ကွင်းထဲ၌ လေယာဉ်ပျံနှင့်စက်ဘီး တိုက်မှု ဖြစ်ပွါး
မြန်မာဇာတ်မင်းသားများ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှု များပြားလာ
ပုဂံ၌ ငလျင် ပြင်းထန်စွာလှုပ်မှုကြောင့် ဘုရား၊ ပုထိုးများ ပြိုပျက်
နိုင်ငံတှောလုပ်ကြံမှု ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း လွတ်မြောက်သွားသူအချို့ ရှိခဲ့
တို့ဗမာသီချင်းကို တေးရေးစပ်သူကိုယ်တိုင် ပရိသတ်နှင့်အတူ ပထမဆုံးအကြိမ် သီဆို
ဘီအေအေကွင်း၌ ပထမဆုံးအကြိမ် အမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
မနဿတလေးမြို့၌ ပရိယတဿတိသာသနဟိတ သာသနဗိမာန်တှောကြီး ဖွင့်လှစ်
ငလျင် ပြင်းထန်စွာလှုပ်စဉ်အတွင်း မိခင်နှစ်ဦးမှ ကလေးများ ဖွားမြင်
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ခေတဿတ ပေးပို့မည့် တိရစဿဆာန်လေးများ လေယာဉ်စောင့်ရင်း ရန်ကုန်၌ ခေတဿတ နားခို
မြန်မာပြည်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း နာမည် ပြောင်းလဲ ခှေါဝှေါ
မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပထမဆုံး စက်မဲ့လေယာဉ် စီးနင်းပြ
ရှေးမြန်မာအမြောက်သေနတ် ခြောက်လက်အား အခမ်းအနားဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်
ကမဿဘာ့သစ်ပင်စိုက်ပျိုးသောနေ့အခမ်းအနား မြန်မာနိုင်ငံ မြို့ကြီးများ၌ တစ်ပြိုင်နက် ကျင်းပ
ကျိုက်ဒေးယုံစေတီဟောင်း နေရာမှ ဆင်းတုတှော တူးဖှောရရှိ
စုန်း၊ ကဝေနှင့် သရဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ ထုတ်လုပ်ပြသခွင့် မပြုတော့
မြန်မာဆပ်ကပ်အဖွဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ် ပြုလုပ်
ရာဇဝင်နောက်ခံဝတဿထုရေး ဆရာကြီးရွှေစကြာဦးစိုးမြင့် ကွယ်လွန်
ဂျပန်ခေတ်တွင် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့က မြန်မာနိုင်ငံအား လွတ်လပ်ရေး ကြေညာ
စာရေးဆရာကြီး မဟာဆွေ ကွယ်လွန်
ရုရှားပရာဗဒါသတင်းထောက် ထားဝယ်မြို့ မောင်းမကန်သို့ ရောက်ရှိလာ
ဓနုဖြူ၌ စိုက်ထူရန် မဟာဗနဿဓုလကြေးသွန်းရုပ် ရွေးချယ်
အှောတိုမစ်တစ် အချက်ပြမီးပွိုင့် စတင်ဖွင့်လှစ်
ဗိုလ်မှူးကြီးဟရန်သီယို တိုင်းပြည်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးသွား
ဧရာဝတီမြစ်ရေကြီးမှုကြောင့် သာရဝေါရေကာတာ ကျိုးပေါက်
မြန်မာလူမျိုးများထဲမှ ပထမဆုံး သဘေဿငာကပဿပတိန် ခန့်အပ်ခံရ
သုံးနှစ်ကျှောကြာ အစာရေစာ မစားဘဲ အာဟာရသိဒဿဓိ ပြီးမြောက်နေသူတစ်ဦး တွေ့ရှိရ
ပန်းကန်ပြားပျံဟု ယူဆရသည့် အရာတစ်ခု ဖြတ်သန်းသွားသည်ကို မြို့ကြီးအချို့မှ မြင်တွေ့ရ
မဟာမြိုင်တောနက်ကြီး အတွင်း၌ ရှေးဟောင်းကျောက်တိုင်များ တွေ့ရှိရ
သိကြားမင်း၏ ရွှေပေလွှာကြောင့် မုဒုံမြို့မှ ပုံနှိပ်တိုက်များ ဝင်ငွေကောင်း
မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန်စာပေအသင်း စတင်ဖွဲ့စည်း
မာယာကြာခြည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကမေဿဘာဒီးယားက ဝယ်ယူမည်
ဟီရိုရှီးမားနေ့ အခမ်းအနား ဦးဘရီဇရပ်၌ ကျင်းပမည်
ထူးဆန်းသော နွားကလေးအား တိရစဿဆာန်ရုံသို့ ပေးပို့လှူဒါန်း
အသက်၁၃ဝနှစ်အရွယ်ရှိ အဘွားအိုတစ်ဦးအား မြန်မာနိုင်ငံ၌ တွေ့ရှိရ
လန်ဒန်ပြတိုက်မှ အဖိုးတန်ရွှေပေလွှာများ မိုကဿကရိုဖလင် ရိုက်ကူးပေးပို့
မနဿတလေးဈေးချိုတှော နာရီစင်ကြီး လေးမျက်နှာမှ အချိန်သုံးမျိုး ပြနေ
တောင်ပှေါဒေသ၌ မကြုံစဖူး ရေကြီးမှု ဖြစ်ပွါး
စည်းကမ်းမဲ့ လမ်းဖြတ်ကူးသူများအား ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စတင် အရေးယူ
မီးရထား ကြေးနန်းဌာနမှ မြန်မာစာကို အသုံးပြုတော့မည်
ရန်ကုန်မြို့ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၌ မျက်မမြင်ကျောင်း စတင် တည်ထောင်
မြန်မာ့ဂီတလောကတွင် ထင်ရှားသည့် အဆိုတှော ဦးမြကြီး ကွယ်လွန်
အလောင်းမင်းတရားကြီး စခန်းချခဲ့သော နေရာ၌ ကြေးမောင်းကြီး တွေ့ရှိ
ပုဂံ ရှေးဟောင်းဘုရားများ လာရောက်ဖူးမြှောနိုင်ရန် လေယာဉ်ကွင်း တည်ဆောက်မည်
ရုရှားနိုင်ငံရောက် အယ်လ်စင်ကီ လူငယ်ပွဲတှောတက် မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့က အာကာသယာဉ်မှူးသို့ ဂုဏ်ပြုတေး သီဆို အသံလွှင့်
နယ်ခြားဒေသ မြဝတီမြို့၌ မီးသတ်အဖွဲ့ စတင်ပှေါပေါက်လာ
ပုသိမ် ရေဘေးရံပုံငွေအတွက် ရုပ်ရှင် ပြသ
တောင်ပြုန်းမင်းနှစ်ပါး ၁၄နှစ်ကြာ ချိုးရေတှော သုံးမသွားနိုင်
ကျောင်းသူကျောင်းသား ၁၆၅ဦး မြန်မာ့ရိုးရာနာမည်များ ပြောင်းလဲ
တမန်တှောမွေးနေ့ အခမ်းအနား အောင်ဆန်းအားကစားပြိုင်ကွင်း၌ ကျင်းပ
ရုပ်စုံသဘင် မတိမ်ကောစေရေးအတွက် ပန်တျာကျောင်းများတွင် သင်ကြားပေးရန် ဆွေးနွေး
ပထမဆုံးအကြိမ် ဘောလုံးဒိုင်လူကြီးအောင်လက်မှတ် ပေးပွဲ ကျင်းပ
ခါခါဘိုရာဇီတောင်ထိပ်သို့ အောင်မြင်စွာ တက်ရောက်နိုင်ပြီ
ရေးမြို့နယ်အတွင်း ထူးဆန်းသော ပါဠိဘာသာစကားပြော အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပှေါပေါက်
ဦးဝိစာရ အထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင်ဖွင့်ပွဲအတွက် ဆောင်ရွက်ရေး ကှောမတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်း
မြိတ်ခရိုင် တောနက်အတွင်း၌ ထူးဆန်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာ တွေ့ရှိ
နေ့ချင်းပြီး စာသိမ်း၊ ငွေသိမ်းစနစ် စတင်တော့မည်
မနဿတလေးတကဿကသိုလ် သမိုင်းပါမောကဿခ ဒေါက်တာသန်းထွန်းနှင့်အဖွဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားများ သမိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှု လေ့လာ
မင်းတုန်းမင်း၏သားတှော မြင်ကွန်းမင်းသားကြီး ကွယ်လွန်
သခင်ဘသောင်း၏ ပန်းသာမစာဥ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရုံတင် ပြသတော့မည်
ချင်းတောင်တန်းဒေသ၌ အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်
မြန်မာနိုင်ငံမှ အုပ်ကြွပ် အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီ
ကုကဿကိုင်းရေလှောင်ကန်တံခါး မီးမောင်းထိုး၍ ရှာဖွေမည်
ရွှေမှောဓေါ စေတီတှော၏ ပိနဿနဲတိုင်နှင့်ငှက်ပျောဖူးကြီး မြေအောက်မှ ပြန်လည် ထွက်ပှေါလာ
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားပှေါ၌ ပြင်ဆင်ရေးသားသူနှစ်ဦးအား ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အရေးယူ
သီပေါမင်းလက်ထက် စာဆိုတှော အဝေးရောက်မင်း ကွယ်လွန်
ရေဘေး ရန်ပုံငွေအတွက် ပါလီမန်အမတ်များ ဘောလုံးပွဲ ကျင်းပ
ရွှေဘုံနိဒါန်း ကျမ်းစာပေထုပ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ
ပြည်တွင်းဖြစ် ကြက်တောင်များ အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီ
ကျောက်ဖြူမြို့၌ မိုးရွာသွန်းမှု စံချိန်ကျိုး
အဂဿငတေဖျှောစက် ပြည်တွင်းမှ အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီ
ရနဿတပိုစာချုပ် အထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင်သစ် စိုက်ထူမည်
ရွှေတိဂုံစေတီတှော ရောင်ခြည်တှော လွှတ်ခြင်း
နဝမမြောက် ဂျီစီဘီအေ ကွန်ဖရင့်
စွယ်တှောမြတ် ကြွချီ သတင်း
တရုတ်နိုင်ငံသို့ သံအဖွဲ့ စေလွှတ်မည့် သတင်း
စကြာဒေဝီမိဖုရားကြီး နတ်ရွာစံ သတင်း
မြန်မာအမျိုးသမီး ကုမဿမာရီအသင်း စတင် ဖွဲ့စည်း
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ယူရေနီယံသတဿတု အမြောက်အမြားတွေ့ရှိ
ရွှေတိဂုံစေတီတှော မိုးကြိုးလွဲ တပ်ဆင်ရေး
ဦးသန့်အား ကုလသမဂဿဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် (အစမ်းခန့်) ခန့်အပ်
ငွေစကဿကူ အတုလုပ်ဂိုဏ်း ဖမ်းဆီးရမိ
မနဿတလေး နှစ်တစ်ရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်ခေါင်း ထုတ်ဝေ
မြန်မာနိုင်ငံ၌ လေယာဉ်ပျံ လုပ်နိုင်ပြီ
ယောက်ျားမိန်းမ မကွဲပြားသူတစ်ဦး သတင်း
မေရီမြင့်အုတ်ဂူ ဖောက်ထွင်းသူ ဖမ်းဆီးရမိ
ဥကဿကလာမြို့ ဓါးပြတိုက်မှု သတင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံး လေကြောင်းခရီးစဉ်
ရန်ကုန်လမ်းအချို့ အမည် ပြောင်းလဲ ခှေါဝှေါ
သုံးသောင်းကျှောတန် ဆေးရုံကား လှူဒါန်း
ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်အစည်းအရုံးမှ ဂျပန် ဗုဒဿဓဝင်ဇာတ်ကားကို ကန့်ကွက်
ရွှေတိဂုံစေတီတှော၌ မာကျူရီမီးလုံးများ စမ်းသပ် ထွန်းညှိ
ထိုင်းလေယာဉ်တစ်စင်း ဆီကုန်သွားသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထိုးဆင်း
ပျောက်ဆုံးနေသော အမေရိကန်ရေတပ်သား ပြန်လည်တွေ့ရှိ
လေချွန်ခရာဖြင့် မှောတှောကား ထိမ်းသိမ်းစနစ် စတင်
ပထမဆုံး စာဆိုတှောနေ့ အခမ်းအနား စတင် ကျင်းပ
အလောင်းမင်းတရားကြီး၏ သန်လျက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိ
အာရပ် ပဒေသာကပွဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက် ဖျှောဖြေ
ဂျပန်ပြည်၌ ပထမဆုံး ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ပြသ
သေမင်းတမန်မီးရထားသံလမ်းအချို့ သူခိုး ခိုးခံရ
ရန်ကုန်မြို့လယ်၌ ၁၅သိန်းတန် ပြန်ပေးဆွဲမှု ဖြစ်ပွါး
ပုသိမ်မြို့၌ ဘိုးဘိုးအောင်နှစ်ဦး ပှေါပေါက်
မြန်မာနိုင်ငံ သမဿမတဟောင်း ဒေါက်တာဘဦး ကွယ်လွန်
ရှေးဟောင်းငွေဒဂဿငါးများကို အမျိုးသားပြတိုက်သို့ လှူဒါန်း
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှန်းလုံး လက်ျာကပ်မောင်းစနစ် စတင်
ဆပ်ကပ် ပညာတှောသင်များ ရုရှားနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွါ
ဆိုဗီယက် အာကာသယာဉ်မှူးများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
ရဟနဿတာ ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးနိုင်မည့် ပညာရှင်များ ဖိတ်ခှေါ
ကရင်ပြည်နယ် တောအတွင်း၌ လူပုကလေးများ တွေ့ရှိ
အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသားကြီး၏ နောက်ဆုံးသားတှော ကွယ်လွန်
မြန်မာရုပ်ရှင်ကား မပြသည့် ရုပ်ရှင်ရုံသုံးရုံ တရားစွဲဆိုခံရ
အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ် အားကစားပြိုင်ပွဲ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပ
အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ် အားကစားပွဲ အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်ခေါင်းသစ် ထုတ်ဝေ
ရန်ကုန်မြို့တှောအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မည့်ယာဉ်များ ဝင်ကြေး ကောက်ခံမည်
ဆရာဦးသုခ၏ ဘဝသံသရာဇာတ်ကား ဝင်ငွေ အများဆုံး ရရှိ
ရထားစီးလက်မှတ်မဲ့ ဥပုသ်သည်အချို့ ဒဏ်ရိုက်ခံရ
အလွန်ရှားပါးလှသည့် ဘောက်ဆိုဒ်ခှေါ သတဿတုတစ်မျိုး မြန်မာနိုင်ငံ၌ တွေ့ရှိပြီ
ကိုးနှစ်ကြာ ပိတ်ထားရသည့် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပွဲတှော ပြန်စပြီ
၁၉၅ရခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ မီး ၆၀၁ကြိမ် လောင်ကျွမ်း
မိဖုရားခေါင်ကြီး ဈာပန အခမ်းအနား
ဒီစာအုပ်ဟာ စာဖတ်ဝါသနာပါသူတွေ၊ သမိုင်းကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ၊ ဗဟုသုတကို လိုလားသူတွေအတွက် စာအုပ်စင်မှာ ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး စာအုပ်ကို ဟိုးအရင်တုန်းက ဆရာကြီး လူထုဦးလှလည်း ရေးခဲ့ဖူးတယ် (နှစ်တစ်ရာက အောက်ပြည်အောက်ရွာ၊ သတင်းစာများသည် သမိုင်းကို ပြောနေသည်) ဆရာမောင်သစ်လွင် (လူထု) ရဲ့ ခေတ်ဟောင်း သတင်းစာများကလည်း ဒီလို စာအုပ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးကိုလေးကတော့ သီပေါမင်းနှင့် နယူးယောက်တိုင်း သတင်းစာ ဆိုပြီးတော့ သီပေါမင်းနန်းတက်ပြီး မင်းညီမင်းသားတွေကို လုပ်ကြံတဲ့အကြောင်းတွေ နယူးယောက်တိုင်း သတင်းစာမှာ ဘယ်လိုဖှောပြသလဲ ဆိုတာ ရေးထားတဲ့ စာအုပ် ထုတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒီလို ခေတ်ဟောင်း သတင်းစာတွေကနေ စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေကို ကောက်နှုတ်ပေးထားတာဟာ တကယ့်ကို ကောင်းပါတယ်။ ဆရာတင်နိုင်တိုး စာအုပ်ကတော့ သတင်းလေးတွေက Fancy ပိုဖြစ်တယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ ဟိုးတုန်းက သတင်းစာဆိုတာ အခုလို တစ်စောင်၊ နှစ်စောင် မဟုတ်ပါဘူး။ အများကြီး ထုတ်ကြတာပါ။ သတင်းတွေ ဆိုတာကလည်း အခုခေတ် ဂျာနယ်တွေထက်တောင် ပိုလန်းသေးတယ်။ အခုခေတ် တှောတှောများများ ဂျာနယ်တွေဆို တစ်စောင် ဖတ်လိုက်တာနဲ့ နောက်တစ်စောင် ဖတ်စရာတောင် သိပ်မလိုတော့ဘူး။ သတင်းက ဒီတစ်ခုတည်းကို ဝိုင်းရေးနေကြသလိုမျိုး။
ဆရာတင်နိုင်တိုး စာအုပ်မှာ အားနည်းချက် တစ်ခုက မာတိကာနဲ့ တကယ်အတွင်းမှာပါတဲ့ အဖြစ်အပျက် အကြောင်းအရာတွေ မကိုက်တာပါ။ တခါတလေ မာတိကာမှာ အဲဒီအကြောင်း မပါပေမယ့် နောက်မှာ ပါလာတာမျိုးတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ စာစီစာရိုက်တွေ အားနည်းချက်ကြောင့် ဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ အချို့သော အကြောင်းအရာတွေဟာ သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ Analyze လုပ်ရတာ ဝါသနာပါတာမို့ အဲဒီအချိန်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခြားသော အဖြစ်အပျက်တွေ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တှော အထူးစိတ်ဝင်စားမိတဲ့ သတင်းလေးတွေကို အပြာရောင်နဲ့ ပြပေးထားပါတယ်။ တချို့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ ဆက်လက် စဉ်းစားစရာတွေပါ။ ဒီအထဲမှာပါတဲ့ မီးအလိုလိုတောက်တဲ့ ကျောက်ခဲ ဘယ်ရောက်သွားသလဲ၊ အလောင်းမင်းတရားကြီး ကိုးကွယ်တဲ့ ဆင်းတုတှော ဘယ်ရောက်နေသလဲ (ဒီအကြောင်း ကျွန်တှော ရေးခဲ့ဖူးတယ်)၊ မြန်မာပြည်မှာ တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ ယူရေနီယံတွေ ဘာဖြစ်သွားသလဲ၊ မဟာမြိုင်တောထဲက ကျောက်တိုင်တွေ ရှိသေးလား စတဲ့ အချက်တွေဟာ စဉ်းစားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ စာအုပ်တန်ဖိုး အနည်းငယ် ကြီးမြင့်တယ် ဆိုပေမယ့် ရတဲ့ ဗဟုသုတနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် တန်တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ စာအုပ်ပါ ခင်ဗျား။
Posted by NLS at 7/17/2009 06:23:00 PM0comments Links to this post
ဒီနေ့ Egress မှာ E2 ကျောင်းသားတွေအတွက် ဆီမီနာ တစ်ခုပေးတယ်။ ခေါင်းစဉ်က The Art of Blogging လို့ ပေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ရတဲ့အချိန်က ၂နာရီခွဲလောက်ပဲမို့ အများကြီး အတိုချုပ် ပြောရတယ်။ Blogging အကြောင်းကို ပထမ ပြောပြီးတော့ Online Security အကြောင်းကို အရှင်းဆုံးနဲ့ အမြင်သာဆုံးဖြစ်အောင် ပြောပြဖြစ်တယ်။ အွန်လိုင်းဟာ Secure မဖြစ်ဘူး။ ဒါကို လူတိုင်းသိဖို့ လိုတယ်။ အလုံပိတ် အခန်းထဲကနေ သုံးနေပေမယ့် ကိုယ့်ဒေတာတွေကို ဒါမှမဟုတ် ဘယ်ကနေ ဘယ်ကို ဆက်သွယ်နေတယ် ဆိုတာတွေကို စောင့်ကြည့်လို့ရတယ်။ အဲဒီအတွက် Secure tunnel & encryption တွေလိုတယ် ဆိုတာကို ပြောပြဖြစ်တယ်။ ဘန်းထားတဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ကျှောတယ်ဆိုတာ မခက်ခဲပေမယ့် Security ရဲ့ အနက်အဓိပဿပာယ်ဟာ အဲဒီထက် အများကြီး ပိုပါတယ်။ တှောတှောများများက ဒါကို မသိကြဘူးလို့ ယူဆမိပါတယ်။ နောင်တချိန် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက် အရမ်းဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါ Information တွေရဲ့ အရေးပါပုံ၊ Information Leakage ဖြစ်ခြင်းရဲ့ ရလာဒ်ဆိုးတွေကို ခံစားလာရလိမ့်မယ်။ Encrypted မလုပ်ထားတဲ့ ဒေတာ မှန်သမျှကို အင်တာနက်ပှေါကနေ ဟက်ကာတွေ၊ Network Administrator တွေ၊ ISP တွေအနေနဲ့ အကုန်အကုန်အကုန် သိလို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို ဇောင်းပေးပြီး ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ သတိထားစရာကို မြင်သွားတယ် ဆိုရင်ပဲ ဒီနေ့ ဆီမီနာလေးမှာ လျှာထွက်မတတ် ပြောရတာလေး အောင်မြင်တယ်လို့ ယူဆမိတယ်။ Blogging ဆိုတာ လွယ်ပါတယ်။ Ever Blogging ဖို့တော့ ခက်တယ်။ :) ဒီလိုမျိုး ဆီမီနာလေးတွေ ကမကထ ပြုလုပ်ပေးမယ့်သူတွေ များလာမယ်ဆို ကျွန်တှောတို့ အနေနဲ့ Knowledge ကို ဖြန့်ဝေရတာ ပိုထိရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်ခံပြီး လိုက်လုပ်တာတွေတော့ ခေတဿတရပ်ထားတယ်။ တလောက စစ်ကိုင်းကို သွားလိုက်မိတာ စရိတ် တှောတှောပြောင်သွားလို့ ငြိမ်နေပါကြောင်း။
Posted by NLS at 7/17/2009 06:03:00 PM0comments Links to this post
Tree, tree, why are you crooked?
The heron perched on me.
Heron, heron, why did you perch?
To watchafish.
Fish, fish, why did you rise?
Because the buffalo waded.
Buffalo, buffalo, why did you wade?
Because the herd beat me.
Herd, heard, why did you beat?
Because I was hungry for rice.
Rice, rice, why weren't you boiling?
Because the fire didn't blaze.
Fire, fire, why didn't you blaze?
Because the firewood was damp.
Firewood, firewood, why were you damp?
Because the rain rained.
Rain, rain, why did you fall?
Because the frog called.
Frog, frog why did you call?
Because I was thirsty.
Little blackguard frog in the well under the banyan tree is there not enough to drink?
ဒီကဗျာလေးရဲ့ မူရင်းက မွန်ကဗျာလို့ သိရပါတယ်။ J.A.Stewart ဘာသာပြန်ထားတာ မွန်ကဗျာကို ပြန်ထားတာပါ။ မြန်မာနဲ့ ဘယ်နေရာ စကွဲလဲဆိုတော့ ကျွဲလူးတဲ့နေရာမှာ စကွဲတယ်။ မြန်မာက ကျွဲလူးတာ ဖြုတ်ကိုက်လို့ ဆိုပြီး ပြောင်းသွားတယ်။ မွန်မှာကတော့ နွားကျောင်းသားရိုက်လို့လို့ ဆိုတယ်။ နွားကျောင်းသားက ဘာလို့ ရိုက်တုန်းဆိုတော့ ဗိုက်ဆာလို့တဲ့။ ဗိုက်ဘာကြောင့်ဆာရသလဲဆိုတော့ ထမင်းမကျက်သေးလို့တဲ့။ ဘာလို့ ထမင်းမကျက်လဲဆိုတော့ မီးမတောက်လို့တဲ့။ မီးဘာကြောင့်မတောက်သလဲဆိုတော့ ထင်းစိုနေလို့တဲ့။ ထင်းဘာလို့စိုရသလဲဆိုတော့ မိုးရွာလို့တဲ့။ မိုးဘာကြောင့်ရွာရသလဲဆိုတော့ ဖားအှောလို့တဲ့။ ဒီနေရာမှာ ပြန်တူတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖားအှောရတဲ့ အကြောင်းရင်းမှာ ပြန်ကွဲသွားတယ်။ ဗမာက ဖားအှောတာ မြွေကိုက်လို့လို့ ဆိုတယ်။ မွန်ကတော့ ဖားအှောတာရေဆာလို့လို့ ကွဲသွားတယ်။ မွန်ကဗျာလေး ရိုက်တင်ပေးဦးမလို့ပဲ။ ဇှောဂျီနဲ့လည်း ရိုက်မရ၊ မြန်မာသရီးနဲ့လည်း ရိုက်မရတဲ့ စာလုံးတွေ ပါတာမို့ မတင်တော့ဘူး။ JBRS ဘယ် အမှတ်စဉ်ကလဲဆိုတာ ရှာမရလို့ (?) အမှတ်အသားနဲ့ ပြထားတယ်။ မြန်မာစာလုံးပေါင်းလည်း အဲဒီအထဲကအတိုင်း မပြင်ဘဲ တင်လိုက်တယ်။
Posted by NLS at 7/17/2009 05:46:00 PM0comments Links to this post
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်က ကျွန်တှော့မှာ လုပ်ချင်တာတွေ သိပ်များတယ်။ ဦးတည်ချက်တွေကလည်း ကွဲတယ်။ Who's who in Burma လိုမျိုး National Biography Database လည်း လုပ်ချင်ခဲ့တယ်။ အဘိဓာန်တွေ အားလုံးကို စုပေါင်းပြီး Universal Burmese Dictionary ဆိုတာမျိုးလည်း လုပ်ချင်ခဲ့တယ်။ Wikipedia လည်း လုပ်ချင်ခဲ့တယ်။ Digitizing ကိုလည်း လုပ်ချင်ခဲ့တယ်။ ဒေါက်တာရီရီရဲ့ သုတေသနအဘိဓာန်များမှတ်စုလိုမျိုး သမိုင်းအချက်အလက် ဒေတာဘေ့စ်လည်း လုပ်ချင်ခဲ့တယ်။ ပိုက်ဆံ မတတ်နိုင်တဲ့အတွက် အစအဆုံး ကိုယ်တိုင် လုပ်ရတယ်။ စာကို ကိုယ်တိုင် ရိုက်ရတယ်။ စာအုပ်တွေကို ကိုယ်တိုင် စကန်ဖတ်တယ်။ အဲဒီအခါ မကြာခဏ စိတ်ပျက်အားလျော့တာမျိုး ကြုံရတယ်။ ငါသာ ပိုက်ဆံရှိရင် ဒါတွေ ခဏလေးနဲ့ အကောင်အထည် ဖှောနိုင်မှာပဲလို့။ အဲဒီလို ခဏခဏ စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ကျွန်တှော့စိတ် ပြောင်းသွားတယ်။ ဒီလို ကိုယ်တိုင် လုပ်ခဲ့ဖူးတာဟာ တကယ့် Experience ပါပဲ။ ငွေရှိလို့ လုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် ကျွန်တှော ဒီအတွေ့အကြုံတွေ၊ အဲဒီကနေ တွေ့လာတဲ့ အခက်အခဲတွေကို သိခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ ဒါတွေ ကိုယ်တိုင် လုပ်လာရင်းက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆက်စပ်မှုတွေကို သိလာတယ်။ ဒီလို ကွဲပြားနေတဲ့ စနစ်တွေ အားလုံးကို ဘယ်လို Management လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သိလာတယ်။ သူတို့အချင်းချင်း ဘယ်လိုနည်းပညာသုံးပြီး ပေါင်းစပ်လို့ ရနိုင်မယ်ဆိုတာတွေ သိလာရတယ်။ စာလုံးသန်းပေါင်းများစွာနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ဘယ်အရာက အရေးအကြီးဆုံးလဲ ဆိုတာတွေကို နားလည်လာတယ်။ User Friendliness အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ယူဇာအနေနဲ့ မကြာခဏ စမ်းကြည့်ရတယ်။ အဲဒီအခါ Developer ပိုင်းနဲ့ User ပိုင်းရဲ့ ကွဲပြားတဲ့ လိုအင်တွေကို သိလာရတယ်။ Software ပေါင်းများစွာကို စမ်းသပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ဘယ်ဟာက ဘယ်နေရာမှာ အားသာတယ် ဘယ်နေရာမှာ အားနည်းတယ် ဆိုတာကို သိလာရတယ်။ Digital Library လုပ်ဖို့ ကြိုးစားရင်းက ကွဲပြားတဲ့ အချက်အလက် သိမ်းဆည်းပုံစနစ်တွေကို သိလာရတယ်။ မြန်မာစာက အဂဿငလိပ်စာနဲ့ မတူတာမို့ သူတို့ နည်းစနစ်အတိုင်းကို အားလုံး အတိအကျ လိုက်လို့ မရဘူး။ အဲဒီအခါ Localization လုပ်ဖို့ ကြံစည်ရပြန်တယ်။ အဲဒီမှာ NLP လုပ်ခဲ့ဖူးတာတွေက အထောက်အကူ ပေးတယ်။ စာအုပ်တွေကို စကန်ဖတ်ပြီး ပီဒီအဖ် လုပ်ရာမှာ သာမန် Photoshop သုံးပြီးလုပ်တာထက် Lightroom နဲ့တွဲပြီး လုပ်ရင် Size အသေးဆုံးနဲ့ Resolution အကောင်းဆုံး၊ အသေသပ်ဆုံး Result ရတယ်ဆိုတာ သိလာရတယ်။ နောက်ဆုံး ကျွန်တှောသိလာတာက အရာအားလုံးဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီလို ဆက်စပ်နေတာကို မြင်သွားဖို့ပဲလိုတာ။ အဲဒီလို မြင်သွားတဲ့အခါ အရာအားလုံးကို ပေါင်းစပ်လို့ ရသွားတယ်။ ကျွန်တှော့ရဲ့ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ဦးတည်ချက်တွေဟာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုထဲကို တဖြည်းဖြည်း ရောက်လာခဲ့တယ်။
ဒေတာတွေ အားလုံးကို စနစ်တကျ စုစည်းပြီး Myanmar Knowledge Management System တစ်ခုသာ တည်ဆောက်နိုင်ရင် မြန်မာတွေနဲ့၊ မြန်မာကို စိတ်ဝင်တစား လေ့လာနေကြသူတွေ အားလုံးအတွက် သိပ်အကျိုးရှိမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။ သိချင်လို့ မေးလာတဲ့ မေးခွန်း Query တွေကို အဆင့်ဆင့် အကဲဖြတ်ပြီး အကောင်းဆုံး အဖြေကို ပေးနိုင်လိမ့်မယ်။ စကှောလာတွေ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် သုတေသနပြုရာမှာ အချိန်မြန်ပြီး တိတိကျကျ ပိုဖြစ်လာနိုင်မယ်။ ဒေတာတွေ အားလုံးလည်း Digitize လုပ်ပြီးသားဖြစ်မယ်။ အွန်လိုင်းမှာ အားလုံးအတွက် အခမဲ့ပေးထားပြီး Offline Version ကို တန်ရာတန်ကြေးနဲ့ ရောင်းချမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘဝ ရပ်တည်မှုအတွက်လည်း အဆင်ပြေနိုင်တယ်။ Research Fund တွေရှိရင်တော့ ကျွန်တှော့အလုပ်က အဆင်ပြေမှာပဲ။ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ဒါမျိုးတွေ မရှိတဲ့အတွက် (ဘောလုံးအသင်း တစ်ခုလောက်တောင်မှ (လူ) စိတ်မဝင်စားကြတော့) ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်နိုင်အောင်ပဲ ကြိုးစားတော့မယ်။ တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံဘယ်မရွေ့ပါဘူး။
Posted by NLS at 7/13/2009 09:11:00 PM 1 comment Links to this post
ဇှောဂျီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပေါက်တက်ကရ လျှောက်ရေးနေရတာတွေ ဖတ်နေရတော့ တှောတှော စိတ်ပျက်လာတယ်။ မဆိုင်တာ ဆွဲဆွဲပြီး ကိုယ့်နာမည်ပါ တွဲတွဲပါလာတတ်လို့ ပိုစိတ်ပျက်တယ်။ စိတ်ပျက်တယ်ဆိုတာ စိတ်ညစ်တာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါ၊ နှစ်ခါ၊ သုံးလေးခါ ဘာမှပြန်မပြောချင်လို့ ငြိမ်နေတာကို သူတို့ကိုယ်သူတို့ သိပ်မှန်တယ်လို့ ထင်နေကြလား မသိဘူး။
ဒီလိုဒီလို ရေးနေကြတဲ့ သူတွေဟာ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅မှာ အင်တာနက် မသုံးခဲ့ဘူးတဲ့ သူတွေလို့ပဲ ယူဆမိတယ်။ အဲဒီကာလက အင်တာနက်မှာ မြန်မာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒေတာဆိုတာ မြန်မာလိုမပြောနဲ့ အဂဿငလိပ်လိုတောင် ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ရှိလှတာ မဟုတ်ဘူး။ အခုလို အင်တာနက်မှာ မြန်မာဒေတာတွေ များပြားနေတာဟာ ဇှောဂျီပှေါလာလို့ရယ်၊ မြန်မာဘလော့ဂါတွေကြောင့်ရယ် ဆိုတာ ဖင်ပိတ်ငြင်းချင်လည်း ငြင်းကြပေါ့။ သမိုင်းဆိုတာ ဖျောက်လို့ မရပါဘူး။
ဇှောဂျီနဲ့ရေးရေး မြန်မာသရီးနဲ့ရေးရေး လုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် ခွဲခြားဖို့၊ ပြစေချင်တဲ့ဟာနဲ့ ပြဖို့ဆိုတာ ဘာမှ မခက်ခဲဘူးဆိုတာ မေးနေစရာတောင် မလိုဘူး။ ပြန်ဖြေနေရတာတောင် အချိန်ကုန်သေးတယ်။ သိပ်သိချင်တယ် ဆိုရင်တော့ http://www.soemin.net ကိုစိုးမင်းဘလော့မှာ မရေးခင်လေး လေ့လာကြည့်ပေါ့။ တိုင်းရင်းသားစာတွေ ပျက်အောင် ဖျက်နေသလိုလို ဘာလိုလို လျှောက်ပြောနေတာကတော့ ညံ့ဖျင်းရာ၊ Domain Knowledge နဲလွန်းအားကြီးတာ သိပ်သိသာတယ်။ ထပ်ပြောပြဦးမယ်။ ၂၀၀၄ အင်တာနက်ပှေါမှာ တိုက်ရိုက်စာရေးမယ်လုပ်တော့ ဇှောဂျီကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ဘယ်ဟာမှ အဆင်မပြေဘူး။ ဘရောက်ဇာတွေကလည်း Support မလုပ်သေးဘူး။ ပထမဆုံး အဆင်ပြေတာ Firefox မှာ။ ဒါကြောင့် ဒါကို သုံးခဲ့တာပဲ။ ဒါကို အခုမှ စသုံးပြီး ဟိုဟာကဘာဖြစ်တယ် ဒီဟာကဘာဖြစ်တယ် လျှောက်အှောနေတာ တှောတှော ဆိုးတဲ့ ကိစဿစပဲ။ ဇှောဂျီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူယောင်မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ယူဇာဆိုတာ အဆင်ပြေတဲ့ဟာကို အသုံးပြုမှာပဲ။ အခုလည်း မြန်မာသရီး သုံးနေတဲ့သူ အများကြီးရယ်။ အဲဒါ ဘာဖြစ်သလဲ။ ဇှောဂျီနဲ့ ရေးထားတဲ့ဟာ ဘာမှမလုပ်ဘဲ မြန်မာသရီးနဲ့ ပြမလား။ java script လေးတစ်ခုပဲ ကိုယ့်စာမျက်နှာထဲ ထည့်ဖို့လိုတယ်။ ဇှောဂျီလည်း မကြိုက်ဘူး မြန်မာသရီးလည်း မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ဘာသာ ဖောင့်ခရီရေတာ ဆော့(ဖ်)ဝဲတစ်ခုသုံးပြီး စိတ်ကြိုက် ဖောင့်လုပ်လည်း ရတယ်။ ယူနီကုဒ်မသုံးလို့ သေမသွားဘူး။ အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ အဆင်ပြေတာကို သုံးတာပေါ့။ ဘယ်သူကမှလည်း ရိုက်ပြီး မသုံးခိုင်းပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက အစိုးရက ဇှောဂျီကိုထွင်ပြီး တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားတွေ ပျက်စီးအောင် လုပ်နေသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ဂုဏ်တက်အောင် သွားလုပ်နေသေးတယ်။ ၂၀၀၄တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေဆိုတာ ဘယ်နားနေမှန်းတောင် မသိသေးဘူး။ အခုမှ ဘယ်ကနေဘယ်လို ဆက်စပ်ပြီး တီထွင်စဉ်းစားလိုက်တယ် မသိဘူး။ တှောတှောလည်း တှောတဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေပါပဲ။ အစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့ ဘလော့တွေအားလုံး ဇှောဂျီကို သုံးနေကြတာကိုတော့ ချန်ထားကြပြန်တယ်။
ထပ်ပြီးရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒီနေရာက ဖိနပ်ချွတ်မှ သွားလို့ရတယ်ဆိုရင် ဖိနပ်ချွတ်ပေါ့။ ဒီနေရာက ခေါင်းစည်းရမယ်ဆို ခေါင်းစည်းရမှာပေါ့။ ကိုယ်က လုပ်ချင်တာကိုး။ ဒီလိုပဲ ကိုယ်သွားတဲ့ Website က ဇှောဂျီနဲ့ ရေးထားထား၊ ဝင်းဖောင့်နဲ့ ရေးထားထား၊ မြန်မာသရီးနဲ့ ရေးထားထား ကိုယ်က အဲဒီက ဒေတာကို သိချင်၊ လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဖောင့်လေး ထည့်လိုက်ပေါ့။ မလိုချင် မဖတ်ချင်လည်း မထည့်နဲ့ပေါ့။ ဘာများ ခက်တာမို့လို့လဲကွယ်။ ယူနီကုဒ် ဆိုတာ စနစ်တစ်ခု၊ ဖောင့်ဆိုတာက အပှေါယံကရုပ် ဆိုတာကိုတော့ ခွဲခြားသိမှ ဖြစ်မယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီလိုရေးနေတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်လောက်များ ဒေတာတွေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေရသလဲ၊ ဆော့(ဖ်)ဝဲတွေနဲ့ တွဲပြီး အသုံးပြုဖူးသလဲ၊ ဘယ်စနစ်မှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ရှိနေလဲ ဆိုတာတွေရော သိရဲ့လားလို့ မေးချင်ပါသေးတယ်။
ကျွန်တှောကိုယ်တိုင် ဟိုးအရင်ထဲက ဇှောဂျီကို သုံးခဲ့တာ။ မြန်မာစာပရောဂျတ် တစ်ခုအတွက် ဒေတာတွေ စုဆောင်းရာမှာ ကျွန်တှော့အတွက် အဆင်ပြေတဲ့အတွက် ဒါကို ဆက်သုံးခဲ့တယ်။ စာလုံးလေး တစ်သောင်း၊ နှစ်သောင်း မဟုတ်ဘူး။ ကုဋေနဲ့ ချီနေတာ။ ဒါတွေကို ဆော့(ဖ်)ဝဲတွေနဲ့ တွဲတဲ့အခါ ဇှောဂျီရဲ့ အားနည်းချက် တချို့ကြောင့် အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံရတယ်။ ယူနီကုဒ်စနစ်က စာရိုက်ရတာ ဇှောဂျီထက်တောင် ပိုလွယ်ကူသေးတယ်။ Sorting, Breaking တွေမှာလည်း ပိုလွယ်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ပြသဿသနာက အဲဒီစနစ် အသုံးပြုထားတဲ့ ဖောင့်တချို့က သိပ်လေးလွန်းအားကြီးတယ်။ နုတ်ပဒ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာလုံး သုံးလေးသောင်းကိုတောင် တှောတှော ဖွင့်ယူရတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တှော့ ဒေတာတွေနဲ့ မကိုက်ဘူး။ နောက်တစ်ခုက မြန်မာယူနီကုဒ် စနစ်တချို့ကို မကြိုက်ဘူး။ ဒါလည်း ကျွန်တှော ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီတော့ ဇှောဂျီကို အားမရပေမယ့်၊ စိတ်တိုင်းကျတဲ့ နောက်တစ်ခုလည်း မပှေါသေးတာမို့ ဒါကိုပဲ ဆက်သုံးတယ်။ ကျွန်တှော့ဆီက ပရောဒတ်တစ်ခု ထွက်တဲ့အခါ ယူနီကုဒ်စနစ်နဲ့ ပြစေချင်ရင် အဲဒီစနစ်အတိုင်း ပြပေးမယ်။ ဝင်းနဲ့ ပြစေချင်ရင်လည်း ပြပေးလို့ရတယ်။ ကျွန်တှော အဆင်ပြေတဲ့အရာကို ကျွန်တှောသုံးတာပဲ။
ဇှောဂျီပဲသုံး အဲဒါပဲကောင်းတယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မပြောခဲ့ဘူး။ ယူဇာဆိုတာ သူတို့အတွက် အဆင်အပြေဆုံးဟာကို သူတို့ သုံးမှာပဲ။ ကျွန်တှောတို့က ဇှောဂျီပြန့်ပွားအောင် အဓိက လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင် တနည်းအားဖြင့် ဟုတ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်သလို မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဆိုနိုင်တယ်။ ကျွန်တှောတို့ လုပ်ခဲ့တုန်းက တခြားဖောင့်တွေကမှ ကျွန်တှောတို့အတွက် အဆင်မပြေတာကိုး။ တခြားဟာတွေ အဆင်ပြေခဲ့ရင် တခြားဟာတွေကိုလည်း ညွှန်းခဲ့မှာပေါ့။ ဒါကတော့ မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ User ဆိုတာ ကြှောငြာတိုင်းလည်း သုံးနေတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ အဆင်ပြေတဲ့ ပရောဒတ်ကို သုံးတာပဲ။ အဲဒီ Business Concept လေး သဘောပေါက်ရင် ဇှောဂျီက ဝင်းဖောင့်ခေတ်ကို တစ်ခန်းရပ်ခဲ့သလိုမျိုး ဇှောဂျီခေတ်ကို ကုန်အောင်လုပ်မယ့် နောက်တစ်ခုဟာ သူ့ထက်ပိုပြီး User တွေအတွက် အဆင်ပြေဖို့ လိုမယ်ဆိုတာ ပြောနေဖို့တောင် လိုမယ် မထင်တော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးတစ်ခုက ဇှောဂျီဟာ အခုအချိန်မှာ အင်တာနက်ယူဇာ ၉၉% သုံးနေကြတာမို့ သူတို့အနေနဲ့ ကုဒ်တစ်ခုခုကို ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေအားလုံး ဒုကဿခရောက်ကုန်မှာပါပဲ။ ဒါကိုလည်း သူတို့အနေနဲ့ ထည့်တွက်မှာပဲ။ ကျွန်တှောကတော့ ယူဇာအနေနဲ့ ကန့်ကွက်ရမှာပဲ။ ဒီတော့ ဒီပြသဿသနာကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာ ကျွန်တှောတို့ စဉ်းစားကြည့်တယ်။ အဖြေတွေ့တယ်။ အချိန်မရသေးလို့ မလုပ်သေးတာပဲ ရှိတယ်။ ရရစ်တွေ၊ တစ်ချောင်းငင်တွေ၊ ဟထိုးတွေ မျိုးကွဲနေတာအားလုံး ဘာရိုက်ရိုက် တစ်မျိုးထဲဖြစ်အောင် လုပ်ပေးလို့ရတယ်။ ဒီစနစ် အကောင်အထည် ဖှောဖြစ်ခဲ့ရင် ဇှောဂျီစလုပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေအားလုံးနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကျွန်တှောတို့ ပြောင်းမယ်။ Normalization System လည်း ရှိပြီးသားပါ။ Search Engine တွေအနေနဲ့က အဲဒီလူတွေ လျှောက်ရေးနေသလို ဇှောဂျီနဲ့ရေးလို့ တခြားဟာတွေကို မသိဘူးဆိုတာ မရှိဘူး။ အဲဒါက Search Engine တွေအပိုင်းက လုပ်ရမယ့်အလုပ်။ သူတို့လုပ်လိမ့်မယ်။ ဘာမှမသိဘဲ နားမလည်ဘဲ လျှောက်ရမ်းသမ်း ရေးနေတာတွေ ရပ်တန်းက ရပ်သင့်နေပြီလို့ပဲ ပြောချင်တော့တယ်။
Posted by NLS at 7/13/2009 06:06:00 PM0comments Links to this post
ဝသန်ကာလ မိုးကျတည့်လျှင်၊ ပျှောပျှောပါးပါး မယားနှင့်ဆွေငယ်လင်၊ လက်တွဲငယ်ခြေငင် ကိုယ်တွင်အဝတ်၊ ပုဆိုးအကဿငျီ စုတ်ပြဲပြီ၊ ချည်နီဗောင်းတွတ်တွတ်ကယ်နှင့်လေး။
မိုးရေစွတ်လို့ အဝတ်ကယ်မပါ၊ သားသမီးကို ကိုယ်ထီးပွေ့လို့သာ၊ ဆေးတံတစ်ထွာ ကိုက်ကာထွန်ရင်း၊ လယ်ကွက်ကယ်တစ်ခွင် ထွန်ရေးငင်၊ ရေဝင်ပုစွန်တွင်းငယ်နှင့်လေး။
ဖားပေါင်စင်းငယ် ခြင်းပလိုင်းဝယ်၊ ခရုပီလော ရောနှော၍သာလွယ်၊ ဟင်းရွက်ကယ်နုနယ် တစ်သွယ်ကန်စွန်း၊ ဆူးပုပ်ကယ်ကင်းပုံ အလုံးစုံ၊ ဖူးငုံသာရော၍ပြွမ်းသည်နှင့်လေး။
ချိုလည်းချိုလွန်း ရည်ရွှမ်းများစွာ၊ ကြံဟင်းကြွက်နားပေါင်း သောင်းပြောင်းရော၍သာ၊ အိမ်သို့ရောက်ခါ လျင်စွာချက်ပြုတ်၊ ထမင်းကပူဟင်းကပူ၊ ရှူရှူသာရှမ်းငရုတ်ကယ်နှင့်လေး။
အလုတ်ကယ်ဧရာသာ ငုံ့ကာလွေးတော့သည်။ သားမြေးငယ်မာချာ ဘယ်ညာထွေးတော့သည်။
In the wet season,
When the rain falls,
Wife and dear husband go happily holding hands.
The clothes on their bodies,
Both shirt and sarong,
Are torned and tattered,
But they hadahead-cloth of bright red cotton,
Their little sons and daughters,
They carried in their arms,
Naked and drenched by the rain.
His pipe'saspan long,
And bites on it as he works,
Hauling the plough are all the field,
While the water tickles downs through the crab-holes.
In baskets slung from the shoulder;
Water-snails and Jew's Mallow tossed in pell-mell,
With tenderest leaves for curry-
Pond-site Cress, Rot-thorn,
Coccinia, and all sorts-
All mixed up in rich confusion.
It's sweeter than sweet,
They added Moon-flower leaves,
And leaves of the Mouse-ear, and mix it all up.
When they reach home
It's cooked up quickly-
The rice is so hot,
And the fierce Shan Chillies make them go "Shoo" "Shoo".
With almighty fistfuls,
They bend well over and gobble it down;
And their children and grand children, as fit as can be,
Are all about them in tangled confusion.
Tran: John Okell
Burmese Poetry (1300-1971) by Hla Pe
JBRS, LIV, i&ii, Dec., 1971
ဂျွန်အိုကဲဆိုတာ လန်ဒန်တကဿကသိုလ် SOAS ဌာနခွဲက မြန်မာစာ ဆရာကြီးပါ။ မြန်မာစာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျမ်းတွေ၊ စာအုပ်တွေ များစွာကိုလည်း ပြုစုခဲ့သူပါ။ ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာမှာ မြန်မာစာ ရေးသားဖို့ စတင် လှုပ်ရှားခဲ့သူတွေ ထဲမှာလဲ ပါပါသေးတယ်။ ဒီကဗျာမှာတော့ ဂျွန်အိုကဲ ဘာသာပြန်ချက်ကို သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ကဗျာတွေကို ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာ K တို့ J.A.Stewart တို့ ဘာသာပြန်ချက်တွေက ပိုလှတယ်လို့ ခံစားရတယ်။
Posted by NLS at 7/13/2009 03:40:00 PM0comments Links to this post
Labels: Poem, Translation
A PRESENT OF CHEROOTS
I did not buy them: with mine own hands I cut the fresh leaves.
Without the aid of fire, unable to dry them in the sun,
I had to keep them under my bed.
They are for you to smoke.
I nip them off near the pedicle with my front teeth.
Sweet as none other are these tobacco-rolls.
Without the aid of silk, but binding them withasingle cotton thread,
To my sweetheart since youth who is going to Golden Ava
I send them asapresent.
ဒီကဗျာလေးကို မယ်ခွေ ရေးတယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ်။ ဆရာကြီး ဒေါက်တာလှဘေ ဘာသာပြန်ရာမှာတော့ ရေးသူမသိလို့ ဆိုထားပါတယ်။ PS: စစချင်း မဝယ်ဘူး မယ်ခူးတဲ့ဖက်စို ဖြစ်ရမှာကို မှားပြီး မရွယ်ဘူး မယ်ခူးတဲ့ဖက်စို လုပ်ထားမိလို့ တာဝန်သိပြည်သူတစ်ဦးရဲ့ သတင်းပေးချက်အရ ပြင်လိုက်ပါတယ်။ မှားတာရှိအားနာ၏ ပါခင်ဗျာ။
Posted by NLS at 7/06/2009 08:27:00 PM0comments Links to this post
Labels: Literature, Poem, Translation
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ အသင်းက ကြီးမှူးပြီး MCPA Challenge Award ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MCPA ရဲ့ ပထမဆုံး ပြိုင်ပွဲဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာလောကအတွက် ထူးခြားတဲ့ ရလာဒ်တစ်ခုကို ဆောင်ကျဉ်းပေးလာနိုင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်း ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အရင်တုန်းက ပရိုဂရမ်းမင်း ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ ပုံစံ မတူပါဘူး။ ဒါက Research ကိုအဓိကထားပြီး ကာလကြာရှည် ပြိုင်ရမယ့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါမယ်။ ဆုကြေးငွေက ကျပ်သိန်းသုံးဆယ်လို့ ယေဘုယျ သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာဘာသာနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ ဝဘ်စာမျက်နှာတွေ များပြားလာတာနဲ့အမျှ မြန်မာဘာသာအသုံးပြုပြီး အင်တာနက်မှာ အချက်အလက် ဒေတာတွေကို တိတိကျကျ ရှာဖွေရရှိနိုင်အောင် ပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့တွေ အနေနဲ့ မြန်မာအချက်အလက် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် (Myanmar Search Engine) တစ်ခု တည်ဆောက်မှု ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို မကြာခင်မှာ www.mcpa.org.mm မှာ တရားဝင် ကြေငြာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အဖွဲ့အလိုက် ခုကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်မယ်ဆို ပြင်ဆင်နိုင်အောင် လျှို့ဝှက် သတင်းပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား။
Posted by NLS at 7/06/2009 05:31:00 PM 1 comment Links to this post
By Padethayaza (ob. A.D. 1754)
In the beginning of the hot weather, when haze rises,
With his ladder and inseparable pot,
His sharp knife stuck in his waist,
To the tari buds and tari branches luxuriantly sprouting,
With his seat slung from his shoulder he climbs.
နွေဦးကာလ မြူထသောခါ၊ ရင်းထောင်ရင်းဆွဲ ဆောင်မြဲအိုးလွယ်ကာ၊ ဓားနှီးထက်စွာ ခါးမှာချပ်လျက်၊ ထန်းပွင့်ထန်းခိုင် ရွှန်းမြိုင်မြိုင်၊ ကလိုင်သာလွယ်လို့ တက်သည်နှင့်လေး။
Tari stalks and spreading tari leaves
He cuts and notches amain to win the first fresh tari juice.
His loving wife collects the tari juice.
He shouts and cries to his sons and grandsons and calls to the dogs and pigs.
And, behold!ahare-net corded with tari-fibre.
ထန်းပင်ထန်းလက် ထန်းရွက်ကယ်ဝေဝေ၊ စင်အောင်ခုတ်ထစ် နုမျစ်ကယ်ထန်းဦးရေ၊ မယားငယ်ဆွေ ထန်းရေသိမ်းဆည်း၊ သားမြေးဟစ်ကြှော ခွေးဝက်ကယ်ခှေါ၊ ထန်းလျှောသာယုန်ပိုက်စည်းငယ်နှင့်လေး။
The noise of calling resounds; men are clamorous;
Dogs yelp, men yell; they strike and beat.
Chameleon, hare, partridge-all that are in the bushes-
Quail, fowl, iguana, snake,
Wolves, too, straightway come out.
ခှေါသံရိုက်ဟည်း လူလည်းကြှောငြာ၊ ခွေးဟစ်လူဟစ် ခတ်ပစ်ကယ်ခြောက်သောခါ၊ ပုတက်ယုန်ခါ တောမှာရှိကြ၊ ငုံးကြက်ကယ်ဖွတ်မြွေ ဝံပုလွေ၊ မနေထွက်လာကြသည်တည့်လေး။
With joyous zest the wife
Getsamixed load of curry-leaves good and indifferent.
The husband's concern is the hares and such other
Creatures of the wild as he encounters;
He takes and puts them in his sack.
ဝမ်းသာအားရ မယားကတစ်သွယ်၊ ဟင်းရွက်ဆိုးကောင်း၊ သောင်းပြောင်းရော၍လွယ်၊ လင်ကတစ်သွယ် ယုန်ငယ်ကစ၊ တောသတဿတဝါ တွေ့တိုင်းကိုသာ၊ အိတ်မှာသာယူ၍ချသည်နှင့်လေး။
And so returning and having restedalittle,
They do their roasting at the jaggery fire on sharp spits.
When the curry-pot boils they put in the roast,
And stir the pot, and cook it in water.
They have, too, star-gazing chillies.
သို့နှင့်ရောက်က ခဏအောင့်လျှင်၊ တံစို့ထက်နှင့် ထန်းလျက်ဖိုမှာကင်၊ ဟင်းအိုးဆူလျှင် အကင်ခပ်ပြီး၊ အိုးကင်းနှင့်လှော ရေနှင့်ကြှော၊ မိုးမျှောငရုတ်သီးငယ်နှင့်လေး။
When all is set on the large wicker tray,
Daughters and sons, so many there is scarce room,
Push and thrust withasingle knee,
Vying with each other and determined to eat.
They fall to in fine style plying the coconut dipper.
နှီးဒေါင်းလန်းကြီး ခူးပြီးသောခါ၊ သမီးနှင့်သား များလို့မဝင်သာ၊ ဒူးတစ်ဖက်ဟာ တွန်းကာဖယ်လျက်၊ သူ့ထက်ငါလေ စားတော့မည်စေ၊ စပေသာလှအုန်းခွက်ကယ်နှင့်လေး။
Each with bent head takes handfuls and gobbles.
When they have finished, there is no washing-up; they leave it to the dogs.
ငုံ့လျက်ကိုယ်စီသာ ဆုပ်ကာလွေးတော့သည်။ ပြီးလျှင်ရေမရှာ ခွေးသာကျွေးတော့သည်။
[Anthology of Burmese Literature, ii, 2.]
Posted by NLS at 7/05/2009 08:36:00 PM0comments Links to this post